-Dhacdo China FK814 Automatic Top&Bottom Summaynta Machine Machine iyo alaab-qeybiyeyaasha |Fineco
FK814 Si Toos ah u Sarreeya & Mishiinka Sumadaynta Hoose
FK814 waxay leedahay hawlo dheeraad ah oo lagu kordhinayo:
1.Configuration code printer ama qalin-jet printer, marka la calaamadinayo, daabac lambarka dufcada wax soo saarka cad, taariikhda wax soo saarka, taariikhda dhaqangalka ah iyo macluumaadka kale, codeing iyo calaamadaynta ayaa la fulin doonaa isku mar.
2.Configuration printer,ka beddel waxa ku jira daabacaha wakhti kasta,waxa ay xaqiiqsadaan shaqada daabacaadda iyo calaamadaynta isku mar.
3.Shaqada quudinta tooska ah (oo lagu daro tixgelinta alaabta);
4.Automatic function ururinta walxaha (oo lagu daray tixgelinta alaabta);
5.Kordhi qalabka calaamadaynta;
Habka hagaajinta FK814 waa mid fudud:
1. hagaajin habka calaamadaynta sare ee ka sarreeya 2mm marka loo eego alaabta
2.Adjust habka calaamadaynta hoose hoose oo ku saabsan 2mm ka hooseeya alaabta.
3. Hagaaji suunka gudbinta iyo xawaaraha calaamadaynta shaashadda taabashada si ay u rabaan inay u dhigmaan.
4. Hagaajin booska dareemaha si calaamad kasta ay gebi ahaanba uga baxdo.
5. Hagaajin dhererka burushka, u ogolow buraash in yar taabto dusha calaamadaynta ee alaabta.
Dhulka dabaqa ah ee FK814 qiyaastii 1.74 isteerin.Isbeddelka Taageerada Mashiinka.
Mashiinka calaamadaynta FK814 wuxuu leeyahay habab hagaajin fudud, calaamad sare oo sax ah iyo tayada wanaagsan, Lagu dabaqi karo shuruudaha saxda ah ee sare, alaabta wax soo saarka sare, wayna adagtahay in qaladka lagu arko indhaha qaawan.
Cabbirka dhalada suuit (mm) L: 40 ~ 400 W: 40 ~ 200 H: 0.2 ~ 150; waa la beddeli karaa
Cabbirka summada suudhka (mm) L:6-340mm;W(H):15-130
Cabbirka Mashiinka (L*W*H) ≈1930*695*1390(mm)
Cabbirka Xidhmada (L*W*H) ≈1950*730*1450(mm)
Wareegtada sumadda Aqoonsiga:Ø76mm;OD: ≤240mm
2 Madaxa Calaamadinta Sare Ku calaamadinta dusha sare, xudunta calaamadeeyaha, oo ay ku jiraan summada dabaylaha iyo qaab dhismeedka wadista
3 Madaxa calaamadaynta hoose Ku calaamadinta xagga hoose, xudunta calaamadeeyaha, oo ay ku jiraan summada dabaylaha iyo qaab dhismeedka wadista
4 Dareemka Alaabta Soo saar alaabta
5 Saxan diirran Ka saar calaamadda warqadda siideynta
6 caday Oogada sumaddeysan
7 Shaashada taabashada Halbeegyada hawlgalka iyo dejinta
8 Qalabka Xoojinta Riix badeecada calaamadsan si aad u xoojiso calaamadaynta
9 Saxanka Ururinta Ururi alaabta la calaamadiyey
10 Sanduuqa Korontada Dhig qaabaynta elektarooniga ah
11 Jidka-ilaalinta labada dhinac Alaabta u ilaali si toos ah, waxaa lagu hagaajin karaa iyadoo loo eegayo cabbirka alaabta.
1. Guji xiddiga shaashadda taabashada.
2. Alaabta la ag dhigo birta ilaaliyaha, ka dibna suunka wax qaada ayaa horay u sii dhaqaajiya alaabta.
3. Marka dareemaha uu ogaado in alaabtu ay gaadheen goobtii loogu talagalay,mashiinku wuxuu soo diri doonaa calaamadda oo buraashku wuxuu ku dhejiyaa calaamadda alaabta, habka calaamadaynta ayaa la dhammeeyaa.
Hore: FK812 Kaadhka Tooska ah/Boorsada/Mashiinka Calaamadaynta Kartoonka
Xiga: FK815 Mashiinka Calaamadaynta Calaamadaha Geeska oo toos ah
Summada hoose ee tooska ah
Mashiinka calaamadaynta Khadka Wax soo saarka ee tooska ah
Madaxa calaamadinta hoose
Mashiinka calaamadaynta hoose
Mashiinka calaamadaynta khadka wax soo saarka ee hoose
sanduuqa sare iyo hoose mashiinka calaamadaynta dusha sare
sanduuqa kartoonka dusha sare iyo mashiinka calaamadaynta hoose
kartoonnada dusha sare iyo mashiinka calaamadaynta hoose
qalabka mashiinka calaamadaynta
sanduuqa caaga ah ee sare iyo hoose mashiinka calaamadaynta dusha sare
mashiinka calaamadaynta dusha iyo hoose
summada dusha iyo hoose
mashiinka calaamadaynta sare iyo hoose